Shiinaha warshad KN95 iyo soosaarayaal | SUREZEN
1. Qaab dhismeed qurxoon oo qurux badan iyo dhowr lakab oo la ilaaliyo, kaas oo kala saari kara qaybaha si hufan una kicin kara ur gaar ah, siigada, bakteeriyada iyo fayrasyada.
2. Kala-shaandhaynta lakabyo badan, lakab maqaar-saaxiibtinimo leh oo la heli karo, dhar aan tolmo lahayn oo dusha ah, lakabka dhalaalaya, iyo lakabka shaandhada.
3.3D goynta saddex-geesoodka ah ayaa hagaajin kara ku-habboonaanta wejiga, hagaajinaysa saamaynta ilaalinta, isku-xoqitaanka aan xaddidnayn, xiritaanka xiinka xiisaha leh ee aan walxaha lahayn, alxanka wanaagsan, dhejiska laastikada ah ee sarreeya, naqshadeynta jirka ee ballaaran ma yeeleyso maqaarka, waqti dheer maahan dhagan, oo gashan raaxo badan.
Maaskarada N95 waxay leedahay waxtarka sifeynta ee ka badan 95% ee walxaha leh dhexroor hawleedka 0.075µm ± 0.02µm. Dhexdhexaadinta aerodynamic ee bakteeriyada hawada iyo fangaska fangasku badanaa wey kala duwan tahay inta udhaxeysa 0.7-10 µm, taas oo sidoo kale ku dhexjirta kaladuwanaanta ilaalinta ee wajiyada N95. Sidaa darteed, maaskaro N95 waxaa loo isticmaali karaa ilaalinta neefsashada ee walxaha qaarkood, sida boodhka soo baxa inta lagu gudajiro howlaha shiididda, nadiifinta iyo ka shaqeynta macdanta, bur iyo waxyaabo kale oo gaar ah. Waxay sidoo kale ku habboon tahay dareeraha ama saliida aan saliida lahayn ee aan saliida lagu soo saarin. Arrin gaar ah oo ka mid ah gaaska waxyeellada leh ee waxyeelada leh. Waxay si wax ku ool ah u sifeyn kartaa oo u sifeyn kartaa urta aan caadiga ahayn ee la neefsaday (marka laga reebo gaaska sunta ah), waxay gacan ka geysaneysaa yareynta heerka soo-gaadhista qaar ka mid ah maaddooyinka yar-yar ee la nuugi karo (sida caaryada, anthracis, qaaxada, iwm.), Laakiin ma baabi'in karto infekshinka xiriirka, jirrada ama halista dhimashada
2. Ha ku cadaadin maaskaro gacmahaaga. Maaskarada 'N95' waxay faquuqi karaan oo keliya fayraska dusha maaskaro. Haddii aad ku maroojiso maaskarada gacmahaaga, fayrasku wuxuu ka dhex tiqi doonaa maaskaro dhibco, taas oo si fudud u keeni doonta infekshinka fayraska.
1. Marka neefsashada neefsashadu si weyn u kordho;
3. Marka maaskaro iyo wejiga aan si dhow la isugu xidhi karin;
Hore: maaskaro qalliin